के तपाई चन्द्रागिरीडाँडा पुग्नुु भयो त ? – Tourism News Portal of Nepal
के तपाई चन्द्रागिरीडाँडा पुग्नुु भयो त ?
काठमाडौं उपत्यका र आसपासका मनोरम दृश्य हेर्ने रहर कसलाई पो हुदैन र ? त्यहि रहर पूरा गर्न हराभरा र सुन्दर प्राकृतिक दृश्य अवलोकण गर्ने ठाउँ बनेको छ चन्द्रागिरी । शहरको धुवाँ धुलो पन्छाउँदै काठमाडौं नजिकै रहेको चन्द्रागिरीडाँडा पुग्ने क्रममा केबुलकारबाट देखिने प्राकृतिक सुन्दरताले सबै दंग समेत हुन्छन् ।
हरिया सुन्दर डाँडा, अनि केबुलकारका आवातजावत गर्ने डिब्बाहरुले मनै आनन्दित बनाउँछ । झन्डै १० मिनेटको यो यात्रामा काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन हरिया बनजङगलमा रहेका जीवजन्तु पनि देख्न पाइन्छ । लहरै लागेका रूख तथा बुट्यान र हराभरा भएका डाँडापाखाका सुन्दर दृश्यले जो सुकैको मन लोभ्याउने गरेको छ ।
चन्दागिरी केबलकारको यो यात्रा शुरु हुन्छ थानकोटको त्रिभुवनपार्क परिसरबाट । करिब साढे दुई किलोमिटर उचाइमा रहेको चन्द्रगिरी डाँडा पुग्न केबलकारबाट झन्डै १० मिनेट लाग्ने गरेको छ । समुद्री सतहबाट दुई हजार पाँच सय ५१ मिटरको उचाईमा रहेको चन्द्रागिरीडाँडा मनोरम दृश्यका लागि मात्रै नभई धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि चर्चित छ ।
चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको चन्द्रागिरी केवुलकारमा ३८ वटा मानिस चढ्ने र ३ वटा सामान बोक्ने सहित ४१ वटा क्याविन रहेका छन् । केबलकार सञ्चालनमा आएको एक बर्षमा करिब पाँच लाख पर्यटकले चन्द्रगिरीडाँडा अवलोकन गरिसकेका छन् । सञ्चालकहरुले भने आन्तरिक पर्यटनलाई सुदृढ पार्दै देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउने अपेक्षा रहेको बताउछन ।
बालबालिका, युवा र वृद्धवृद्धाका लागि चन्द्रागिरी डाँडामा अत्याधुनिक रिसोर्ट, मनोरञ्जनपार्क, भ्युटावरको व्यवस्था गरिएको छ । दृश्यालोकनका क्रममा चन्द्रगिरी डाडाबाट देखिने उत्तरी हिम शृङखलाले यो यात्रालाई अझ मनोरम बनाउने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा होमिएकी सतिदेवीलाई बोकेर पृथ्बी परिक्रमा गर्न निस्कदा सतिदेबीको भाल अर्थात् निदार पतन भएको बिश्वासले भालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्नेको यहाँ घुइचो नै लागेको हुन्छ ।।
प्रकाशित मिति : असार ८, २०७४